विराटनगरका मेयर भीम पराजुली भन्छन् “कर्मचारीसँग काम गर्ने टीम स्पीड मिलेन”
विराटनगर, २७ असार। विराटनगर महानगरपालिकाकाे मेयरको रुपमा भीम पराजुलीले कार्यभार सम्हालेको एक बर्ष पूरा भएको छ ।दुई दशक लामो जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा चलेको स्थानीय सरकारको नेतृत्व गतबर्ष असार २७ गतेबाट पराजुलीले सम्हालेका थिए । यो एक वर्षको अवधीमा पराजुलीले महानगरको विकासका निम्ती योजनावद्ध रुपमा कामको सुरुवात पनि गरेका छन् ।
भीम पराजुली, प्रमुख, विराटनगर महानगरपालिका
दुई दशक कर्मचारीले नै चलाएको स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आएका पराजुली कर्मचारीसँग काम गर्ने टिम स्पीड नमिलेको बताउछन् । नेतृत्व सम्हालेको एक बर्ष पुरा भएको अवसरमा मेरोदेशसँग कुरा गर्दै मेयर पराजुलीले स्पीड नमिलेका कारण काम गर्न कठिन भएको बताएका हुन् । प्रस्तुत छ पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
जनप्रतिनिधको रुपमा एक वर्षको कार्यकाल कसरी बित्यो ?
विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरको रुपमा सपथग्रहण गर्दा मैले भनेको थिए । सुसासन कायम गर्छु । भष्ट्रचार नियन्त्रण गर्छु । सुसान नै समृद्धिको आधार हो । पारदर्शिता अपनाएको छु । भष्ट्रचार मुक्त बनाउने मेरो सोच हो । आफू पनि भष्ट्रचार गर्दिन अरुलाई गर्न दिन्न । म जानेर गल्ली गर्दिन अञ्जानमा भए करेक्सन गरेर अघि बढ्नेछु ।
महानगरमा निर्वाचित भएपछि अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरु अघि बढाएका छौ । त्यसबेला सूरुवात गरिएको १०० दिने काम पुरा गरेका छौ । हामीले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने । मोतीयाबिन्दुको निशुल्क अप्रेशन, छोरी बचाउ अभियान र सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमा बाड्ने काम एकसय दिनभित्र सुरु ग-यौ । धेरै स्थानमा खाल्टा खुल्टी पुर्ने काम पनि १०० दिन भित्र गरेका छौँ ।
त्यस बाहेक विकास निर्माण तर्फ एसियाली बिकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा सञ्चालित दुईवटा परियोजना व्यवस्थीत रुपमा अघि बढाएका छौँ । दुई परियोजना मध्ये सघन सहरी बातावरणिय सुधार परियोजना हामी आउनु भन्दा करिब साढे चार बर्ष अगाडी नै सुरु भएको थियो । तर प्लान वेमा काम भएको थिएन् डामाडोल अवस्था थियो । सघन सहरी विकास परियोजनाको काम चित्त बुझ्दो नभएका कारण क्षेत्रिय सहरी विकास परियोजना आउने नअउने दोधारमा थियो ।
तर जनप्रतिनिधिको रुपमा हामी आएपछि क्षेत्रिय सहरी बिकास परियोजनाको सुरु भयो । कोल्याप्स हुन लागेको प्रोजेक्ट आएको हो । सघनको काम खराब भएका कारण एडिबीले अर्काे प्रोजेक्ट दिन मानेको थिएन् । सञ्चालित सघन विकास परियोजना पनि अनप्लानिङ थियो । हामीले प्लान वेमा काम बढाका छौँ । जनप्रतिनिधिको पहलमा एडिबिले दोस्रो परियोजनामा लगानी गरेको हो । एडिबी परियोजना सञ्चालित अन्य स्थानहरु मध्ये विराटनगर अहिले अगाडी छ ।
हामी आएपछि बसपार्क निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा लग्यौं । प्रधानमन्त्रीले दुई बर्ष अघि नै सिलन्यास गरेको तारणिप्रसाद कोइराला सञ्चारग्राम जग्गा विवाद लगायत अन्य कारणले सुरु भएको थिएन । त्यसको निर्माण हामी आएपछि दु्रत गतिमा लगेका छौ । अहिले निर्माणको चरणमा छ । तीन बर्ष अघि नै भारतले निर्माण गरिदिने भनेको गुरुकुलको भवन निर्माणको कुनै सुर सार थिएन । फाइल पनि थिएन तर हामीले फाइल झिकाएर भारतीय राजदुतलाई भेटेर काम सुरु गर्न भनेका थियौँ । जनप्रतिनिधि आएपछि गुरुकुलको निर्माणको कामपनि द्रुत गतिमा अघि बढेको छ ।
विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर महानगरपालिकाले लबिङ ग¥यौ । महानगर सहित अन्य क्षेत्रको पहल सार्थक भयो । विराटनगर अस्थयी राजधानी बन्यो । अब स्थायी राजधानी बनाउन सबै मिलेर लबिङ गर्नुपर्छ ।
विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन विराटनगर १९ मा अन्तराष्ट्रीय सभागृह निर्माणको काम सुरु गरेका छौँ । पाच विगाहा जग्गा अधिग्रहण गरेर २५०० मानिस अटाउने सभागृह निर्माणको काम सुरु भएको हो । विराटनगरको फाउण्टेन इको पार्क पनि निर्माण सकेका छौँ । साइत हेरेर चाडै निर्र्माण गर्छौँ ।
सामुदायिक विद्यालयको स्तर जब सम्म सुधार हुदैन तब सम्म विकास सम्भव छैन भनेर विराटनगरमा रहेका ५४ सामुदायिक विद्यालय मध्ये ३२ वटामा आधारभूत तहमा अंग्रेजी माध्ययमबाट अध्यापन सुरु गरेका छौँ । हामीले पाच वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने योजना बनाएका छौँ । अंग्रेजी सहित प्राविधिक शिक्षालय बनाउन पाचवटा विद्यालय छनोट गरेका छौँ । पोखरीया, आदर्श मिल्स माबी र एक मदर्शा र लक्ष्मीनारयाण बेद विद्याआश्रमलाई ५०÷५० लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ । नमुना विद्यालय बनाउने काम अघि बढेको छ ।
स्वास्थ्य तर्फ कोशी अञ्चल अस्पताल सुधारकालागि काम गरेका छौ । हाम्रो प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार नभए सम्म समाजको उन्नती प्रगती गर्न कठिन हुन्छ । हामीले सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको ज्ञारेन्टी गरेर अघि बढेका छौँ ।
जनअपेक्षा अनुसार काम भएन भन्ने गुनासो छ नी ?
हामीले सिमित स्रोत र साधानका बाबजुत अधिकतम काम गरेका छौँ । अन्तराष्ट्रीय सभागृह देखि नयाँ १५ वटा योजना ल्याएका छौँ । विकासको कामलाई अघि बढाउन विज्ञहरुको टोलीलाई पनि विराटनगरमा ल्याएर काम गरेका छौँ ।निर्वाचित भएलगतै बाढी आयो । चाडपार्व पनि लगतै आयो । संविधानको कार्यन्यनकालागि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि भयो । थोरै समयमा पनि हामीले जनअपेक्षा अनुसार धेरै काम गरेका छौँ । गर्दैछौँ पनि ।
यो एक बर्षको अवधीमा विभिन्न ऐन कानुन निर्माण गरेका छौँ । समस्याका बाबजुत उल्लेख्य काम गरेका छौँ । हामीले विभिन्न दात्री निकायहरुसगको सहकार्यमा सबैको ध्यान विराटनगरमा तान्न सकेका छौ । भारत, चीन, जर्मन, स्वीसका राजदुत विराटनगर आएका थिए । दात्री निकायका प्रमुखहरुलाई पनि विराटनगरमा ल्यान सहयोग गरेका छौँ । सबैको ध्यान विराटनगरका केन्द्रित गरेका छौँ ।
व्यस्त बजारका काम सुस्त छ किन ?
हामीले कोर एरियाका काम गरेका छैनौँ । व्यस्त बजारमा काम नगरेपनि आसपासका साइडमा काम दु्रत गतिमा भएका छन् । हिजो कर्मचारीको नेतृत्व हुदा विराटनगर भत्काउने काम भयो । निर्माणको काम हामी गरिरहेका छौँ ।
हिजो जताततै संरचना भत्कीएको अवस्थामा थियो । पहिले भत्कीएको ठाउमा बनाउने गरी हामीले कोर एरिया बाहिरका क्षेत्रमा काम गरेका छौँ । बाहिर क्षेत्रको काम सकेपछि ब्यस्त बजार क्षेत्रमा अब बनाउछाँै । हाम्रो सोच पाच बर्ष भित्र ४०० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने टार्गेट छ ।
२०६९ सालमा सुरु भएको ६ लेन सडक परियोजनाको काम विराटनगर बजार क्षेत्रमाा सुस्त थियो । जनप्रतिनिधि आएको एक बर्षमा हामीले काम दु्रत गतिमा अघि बढाउन लगाएका छौँ । २०६९ सालदेखि अडेको कामलाई द्रुत गतिमा लैजान पाच जनालाई थुनेका पनि छौँ । हामी विराटनगरका बाहिरी सडक निर्माण सकेपछि मात्र मुख्य बजारमा हात हाल्नेछौँ ।
विगतलाई फर्केर हेर्दा नयाँ जिम्मेवारी र नयाँ परिवेशका काम गर्दा कस्तो अनुभुति भयो ?
हिजो नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट तत्कालिन विराटनगर उपमहानगरपालिकाको बोर्डमा बसेर काम गरेको थिए । बोर्डमा बसेर काम गरेका कारण मेयरको जिम्मेवारी मलाई नौलो त थिएन तर हिजो भन्ने(प्रश्नगर्ने) ठाँउमा थिए आज काम गर्ने ठाँउमा छु ।
स्वभाविक रुपमा कर्मचारी समायोजन नगरेको र विषयगत कार्यलयहरु हस्तान्त्रण नहुँदा पनि गाह्रो भयो । गाह्रो भएपनि सहजीकरण गरी हामीले आउट पुट लिएका छौँ । अझै पनि धेरै गाह्रो छ हामीलाई । पर्याप्त जनशक्ती छैन् । विषयगत कार्यलय नहुदा समस्या छ । असार मसान्त पछि काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने आशा छ ।
जनशक्ती नहुदा पनि काम गर्न समस्या भयो । छ वटा उपसचिव हुनुपर्ने । तर कर्मचारी स्टक्चर अनुसार सरकारले पठाएको छैन । सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ । दक्ष माग गरेका छौँ तर अझै आएका छैनन् ।
तपाइको काम गर्ने स्पीड नमिलेको हो ?
मेरो अपेक्षा अनुसार कर्मचारीहरुको काम गर्ने स्पीड नमिलेकै हो । स्पीड नमिल्दा कामलाई गती सोचे अनुसार गती दिन सकिएन । कर्मचारी अभाव हुदा पनि समस्या पनि भयो । जुन गतिमा काम गर्न खोजियो तर त्यो गतिमा काम गर्न हिजोका दिनमा स्पीड नमिलेकै हो ।
भोलीका दिनमा अघि बढ्ने योजना ?
हामीले सरकारसंग कर्मचारी मागेका छौ । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न पनि नदिने नँया नियुक्ती गर्न पनि नदिने गरेको छ । संविधान प्रद्धत स्थानीय सरकारको स्वरुप हासिल गर्न सकेको छैन् । संघिय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा काम गर्न कठिन भएको छ तर पनि भोलीका दिनमा सबै समस्या सामधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।
विराटनगरको विकासकालागि हामिले प्लान वेमा काम गरिरहेका छौ । अन्तराष्ट्रीय स्तरको सभागृह निर्माण गर्ने प्रकृया अघि बढेको छ । विराटनगरको मध्य भागमा रहेको ए र बि प्लटलाई अन्डर ग्राउण्ड पार्कीङ सहित फाउन्टेन र इको पार्क बनाउने छौ । इ प्लटलाई विजनेश कम्प्लेक्स बनाउने योजना छ ।
विरेन्द्र सभागृहलाई मर्मत गरी हेर्न लायक बनाएका छौ । तर एयरकण्डीसन सहितको बनाउने हाम्रो कार्ययोजना छ । पूर्वाधारमा सहरी सघन विकास परियोजनाको काम एक बर्षमा ९० प्रतिशत सकिएको छ । विकास निर्माणको कामलाई दु्रतगतिमा लैजान्छौ । हाम्रो सोच पाच बर्ष भित्र ४०० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने तार्गेट छ । दुई बर्ष भित्र धुलो र हिलोमुक्त विराटनगर हुनेछ ।